Iintlobo kunye nemilo yoBugcisa bobuGcisa bobuGcisa
Indlela Ubukhulu beBrash Art Paint buboniswe ngayo
Umfanekiso nguCatherine MacBride / Getty Izithombe
Iibrashi zokudweba zeMboniso ziza kwiindawo ezilinganayo, imilo kunye neenwele. Fumana okuthe kratya malunga neendlela ezahlukeneyo zobugcisa bepayipi kunye nokusetyenziswa kwazo kule nkcazo ebonakalayo, kwaye zama le Paint Brush Quiz.
Ubungakanani bhershi buboniswa ngumbhalo ophrintiweyo kwisibambo. Iibhontshi ziqala ukusuka kwi-000, emva kwe-00, 0, 1, 2, kwaye phezulu. Ephakamileyo inombolo, enkulu okanye ebanzi ibhulashi.
Ngelishwa, akukho ukulingana okuncane phakathi kwabavelisi beebrashi ngokubhekiselele ekubeni zezi zibukhulu kangakanani, ngoko inamba ye-10 kwitshati enye ingaba bubungakanani obuhlukileyo ukuya kwinombolo 10 kwelinye uphawu.
Ubukhulu bobudlelwane beBhusi
Inkcazo ebonakalayo yeentlobo ezahlukeneyo zobugcisa bokupenda. Umfanekiso: © 2007 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
Yikholwa okanye akunjalo, zombini iibhulashi kwisithombe ayikho ubungakanani. 10. Kuyavunywa, umahluko phakathi kobukhulu asiqhelekanga kakhulu; le mibhobho emibini yanyulwa ngokukhethekileyo ukubonisa indlela.
Ukuba uthengela iibhulashi ezivela kwikhathalogu okanye kwi-intanethi kwaye yintengiso ongaziqhelanga nayo, khangela ukuba ngaba kukho ubungqina bokuba ububanzi bobuqhekeza ngamasentimitha okanye iimithamitha. Musa ukuhamba nje ngenombolo yesayizi yokuxubha.
Akukho mveliso eyahlukeneyo yobugcisa bepayipi efana nobunzima, nangona bafanelwe ukuba bafana (njengoko kuboniswe ngenani), kodwa nakubunzima. Ukuba uthengela iibhulashi kwiikhathalogu okanye kwi-intanethi, khumbula ukuqwalasela oku ukuba awuqhelani nolwimi oluthile lwebhoshi.
Ukuba udweba nge-watercolor okanye ipeyinti epholileyo, i-brush enqabileyo iya kubamba ipeyinti enkulu. Oku kwenza ukuba upende ixesha elide ngaphandle kokuyeka. Kodwa ukuba ufuna i-brush yezobugcisa obomileyo, unokufuna i-shashi ephethe ipende.
Iingxenye zeBrash Paint Brush
Inkcazo ebonakalayo yeentlobo ezahlukeneyo zobugcisa bokupenda. Umfanekiso: © 2007 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc
Nangona kungenakwenzeka ukuba ubani oza kukuvavanya ngamagama kwiindawo ezahlukeneyo zebrashi yokupenda, ahlala khona ... ke apha apha xa uhlala uphumelele kwimidlalo ye-quiz.
Isibambo sebhayisiki kaninzi senziwa ngamapipi aphepheni kunye / okanye ahlambulukileyo, kodwa ingenziwa kwiplastiki okanye i-bamboo. Ubude buyaguquka, ukusuka kwifutshane (njengaleyo ebhokisini yepeyinti yokuhamba) ixesha elide (elilungele ukukhutshwa okukhulu). Yintoni ebaluleke ngaphezu kokuba ubude bokuba i-brush ivakalelwa ngokulinganayo kwisandla sakho. Uya kuwusebenzisa kakhulu, ngoko kufuneka ukhululeke ukubamba.
Ziziphi izinto ezibuhlungu okanye iinwele ezisesibhoshini ziyahlukahluka, kuxhomekeke kwinto yokuxubusha ihloswe (jonga: Iiprafu zeBrush Brush kunye ne-Bristles ). Oko kubaluleke kukuba bahlale banjwe kwaye abayi kuphuma rhoqo njengoko upende.
I- ferrule yinxalenye ebambe isibambo kunye neenwele kunye kunye nesimo. Ngokuqhelekileyo zenziwe ngetsimbi, kodwa kungekhona kuphela. Ngokomzekelo, i-brushes yompopu inokwenziwa kwiplastiki kunye nocingo. I-ferrule esemgangathweni enempilo ayiyikugquma okanye ihambe.
Utshini lwebhayisiki ngowona kuphela ekupheleni kwee-crystal, ngelixa isithende apho i-bristle ingena kwi-ferrule ekugqibeleni isibambo (kungekhona ukuba unako ukukwazi ukubona oku ngaphandle kokutsala ibhulashi). Isisu , njengokuba igama liza kuphakamisa, inxalenye ethintekayo yebhasi. (Kubonakala kakhulu kwi-brush ejikelezileyo, kunokuba yiplati enye.) Isibilini esikhulu kwisibhakabhaka se-watercolor sijikelezileyo sikwenza ukuba uthathe inqwaba yepende ngexesha.
Inkcazo ebonakalayo yeentlobo ezahlukeneyo zobugcisa bokupenda. Ifoto © 2011 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
I-filbert yincinci, i-brush flat kunye neenwele eziza kwindawo ejikelezileyo. Isetyenziswe kwicala layo, i-filbert inikeza umgca omncinci; esetyenziselwa isitrato ivelisa i-brroke ebanzi; kwaye ngokuhlukana noxinzelelo njengoko usebenzisa i-brush kwi-tovas, okanye ukuyijikela ngaphesheya, unokufumana uphawu lokufakela.
Ukuba i-filbert ifaka iinwele , ziza kuguga kunye nokusetyenziswa. Isithomboniso sibonisa (ukusuka kwesobunxele kuya kwesokudla) entsha-brand, engasetyenzisiweyo i-filbert, enye eyenziwe ngamakhilomitha ambalwa epeyinti, kunye nomdala kakhulu.
I-filbert umhlobo wam ebhrashi owuthandayo kuba unokuvelisa amanqaku amaninzi. Ininzi yam yokudweba yenziwe nge-No.10 filbert. Andiyi kuphosa i-filberts ephahlaleyo njengoko ingaba luncedo ekuxubeni komile; Andiyi kuba buhlungu kubo njengoko ndibhinqa iinwele ukuba ndizisasaze.
Ibrashi yepende ejikelezileyo yimilo yobuninzi bendabuko, kwaye yintoni abantu abaninzi abakucinga xa becinga "ibrashi yokupenda". I-brush ejikelezayo ejikelezayo iya kufika kwindawo ekhangayo, enokukunceda ukupenda imigca emihle kunye neenkcukacha nayo. (Oku kuyinyani ngokukodwa ukuba i-brush eyenziwe ngeenwele eziphezulu ze-Kolinsky ezinomgangatho ophezulu.) Khangela umntu onomthombo ontle entlahleni, apho ahlutha khona xa uthetha uxinzelelo kwi-brush.
I-brush ejikelezayo kwisithombe ifake izinwele kuyo, kwaye ayizange ibe nephuzu elihle kakhulu nangona ilitsha elitsha. Kodwa ndithenge njengokuba kuya kuba luncedo ekudaleni i-brushstrokes ebanzi njengoko ithambile kakhulu kwaye inobumba obuninzi bepende. Njalo qwalasela into onenjongo yokwenza ngayo ibhulashi; akunakulindela okungenangqiqo okanye uza kuphazamiseka (kwaye uzitshitshise izixhobo zakho zemizobo engafanelekanga).
I-brush ephathekayo, njengokuba igama liza kuphakamisa, enye apho i-bristles ihlelwe khona ukuze ibrashi ibanzi kakhulu kodwa ingabi nkulu. Ubungakanani bebristle buyahlukahluka, kunye nezinye iibhulashi ezinobumba ezide kwaye ezinye zincinci. (Okokugqibela kuthiwa yi-brush square). Xa uthenga ibrashi ephathekayo, khangela enye apho i-bristles inomthombo wamanzi, okanye ungaphindi xa ugoba ngobumnene.
Akuyikuphela kuphela ukuba ibrashi ephothiweyo idale i-brushstroke ebanzi, kodwa ukuba uyayijika ukuze uholele ngomda onqamlekileyo, iya kuvelisa i-brushstrokes. I-short brush flat ikulungele iincinci, i-brushmark ecacileyo.
I-paint brush yepayipi yokuthwala umthamo inqunywe yi-bristles inayo, kunye nobude balezi. I-short-hair, i-synthetic-crystal flat brush iya kubamba ukupenda ngaphantsi kunexaka elide, elidibeneyo okanye eliqhelekileyo leenwele. I-brush ephathekayo esithombeni ifana neenwele ze-hog, ephethe ipende ngokufanelekileyo kwaye, ukuba yomelele, ilungele ukushiya i-brushmarks kwipende xa ufuna ukukwenza oku.
I-Rigger okanye i-LinerBrush
Inkcazo ebonakalayo yeentlobo ezahlukeneyo zobugcisa bokupenda. Umfanekiso © Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc
I-rigger okanye i-liner brush ibhonkco elincinci lisiza kakhulu. Ezi zinokufika kwindawo ebukhali kodwa ingaba nesicatshulwa okanye isitrato. (Ukuba i-angled, bajwayele ukubizwa ngokuba yi-brush yekrele.) Iibhulashi ezinamandla zivelisa imigca emihle kunye nobubanzi obungaguquguqukiyo, okwenza kube lula ukucwangcisa amagatsha amancinci emithini, i-masts, okanye i-whiskers. Bakulungele ukutyikitya igama lakho kumzobo.
Inkcazo ebonakalayo yeentlobo ezahlukeneyo zobugcisa bokupenda. Ifoto © 2012 Marion Boddy-Evans. Ilayisenisi ku-About.com, Inc.
I-brush yekrele ifana ne-bragger okanye i-liner brush, kodwa i-angled engxenyeni kunokuba icaciswe. Unokupenda umgca ococekileyo ngokusebenzisa kuphela intonga, okanye umgca obanzi ngokubamba ibrashi ukuze ezinye iinwele zayo zithinte iindawo. Akukho mangaliso kuba oko kwaziwa nangokuthi i-brush.
Ngokujikeleza ibhrashi esandleni sakho njengoko uhamba phezu komhlaba, kwaye ngokuwunciphisa okanye ukuwukhuphula, ufumana ukwenziwa kwamanqaku okuchaneka, okwenziwa kwekhalligraphic mark . Ukuba ubambelela ngokugqithiseleyo kwisandla sakho kwaye uhambe ngokukhawuleza kwinqanaba lomhlaba, ukuvumela ukuba lenze oko lifuna ngandlela-thile, ufumana uphawu lokukhulula, olucacileyo. Enkulu kumasebe kwimithi, umzekelo
Njengoko igama elithi "mop" licebisa, i-brush ye-mop iyona nto iya kubamba inqwaba yepeyinti epholileyo. I-soft brush ne-floppy, ilungele ukuhlamba amanzi amakhulu.
Qiniseka ukuba uchithe ixesha lokulihlambulula ngokupheleleyo xa usuphelile ukupenda; akuyena umsebenzi ukuba uqhutywe ngebhayisiki kunye neenwele ezininzi!
I-brush ye-fan ibhotshi enobuncwane obuncitshisiweyo obunqambileyo obusasazekayo. I-brush fan isetyenziselwa ukudibanisa imibala kodwa iphinde iphumelele ukupenda iinwele, ingca okanye amagatsha amancinci. (Nangona kufuneka uqaphele ukuba ungenzi amanqaku afanayo okanye aphindaphindiweyo angabonakaliyo.)
Ikhona inokusebenzisa i-brush fan iquka:
• Ukukhuphaza (usasaza amachaphaza amancinci okanye amaqhekeza amfutshane).
• Iigxininiso ezinwele njengoko ikunceda ukuvelisa izibilini.
• Ukumotheka kunye nokuxuba imivimbo.
• Ukudweba umthi okanye utshani
I-Waterbrush: Umnqamlezo phakathi kweBrashi kunye nePeni lomthombo
Umbhobho wamanzi unjenge-intanethi yepeni lomthombo kunye nebhasi. Iqulethwe ngentloko kunye nebhashi kuso kunye nesibambiso esitsha seplastiki esithatha amanzi. Amacandelo amabini ahlahlela kunye kwaye ahlukane kakhulu. Ukuhamba ngokukhawuleza, okuqhubekayo kwamanzi kuhla kwe-brush's bristles njengoko uyisebenzisa, kwaye unokufumana ngaphezulu ngokucwina inkunkuma.
Umbhobho wamanzi ulungele ukusetyenziswa kunye neeplastiki zeeplastiki kunye neepensele zamanzi (kuquka ukuphakamisa umbala ngqo kubo). Abakhiqizi abahlukahlukeneyo bakhiqiza amabhedi, ngamanqanaba ambalwa, kunye nohlobo olujikelezayo. Ukuba isitoreji sakho sezobugcisa asendaweni asinasisitye, izinto ezininzi ze-intanethi zigcina.
Ndisebenzisa i-waterbrush kwi-sketching yesayithi, kunye ne-encorption encane ye-watercolor, njengoko iphelisa isidingo sokuthwala isikhephe ngamanzi. Ukucoca i-brush, ndiyifake ngenyameko ukukhuthaza amanzi amaninzi ukuba aphume, aze asule kuso. (Okanye, ndivuma, ukuba ndiphelelwe yilezo, kwi-sleeve yam shirt.) Awufumani amanzi amaninzi ukucoca i-brush, kodwa kulula kwakhona ukugcwalisa umthombo wamanzi ebhokisini okanye ibhotile yamanzi .
Ndineempawu ezimbini ezahlukileyo, kwaye ngokuqinisekileyo zisebenza ngokungafaniyo, kunye nomnye olula, ukuhamba kwamanzi okuqhubekayo kunye nolunye olufuna ukucacisa ngakumbi ukuba uphume amanzi. Ndizamile ukuzalisa amanzi ngamanzi ngamanzi ahlambulukileyo kunye ne-calligraphy ink, kodwa zombini bavale i-brush. Kwakhona, ndicinga ukuba kuxhomekeke kwitshati ye-waterbrush yakho (kunye nobukhulu beengqungquthela kwiinki) njengoko ndimbonile umhlobo usebenzisa enye egcwele i-sepia inkki ngaphandle kweengxaki.
Ndivile abanye abantu besithi ukuba awuqapheli, unako ukuncela upopayi / amanzi uphindele emanzini kwimifanekiso yakho, kodwa akuyinto endiyifumene nayo. Inokuxhomekeka kwinqanaba lombhobho wamanzi oyisebenzisayo.
I-waterbrush ayinayo i-pigment eninzi njenge-sable watercolor brush njengoko i-bristles idibeneyo, ngoko uza kufumana ukukhangela umbala ngokuphindaphindiweyo. I-bristles iyakwazi ukutshatyalaliswa (njengoko ubona kwisithombeni), kodwa loo nto ayifani ncamnye kwi-bluebrush.
I-waterbrush yenza ipeyinti ukusuka emnyama ukuya kumbala okhanyayo ulula: uqhubeka upenda kunye kunye namanzi angaphezulu uphonsa upende uze ufike ekugqibeleni unamanzi kuphela. Kodwa kwakhona kwenza ipeyinti ezinkulu kwiindawo ezibonakalayo kunelizwi elincinci kunokuba ibhoshi eqhelekileyo. Nangona kunjalo, uza kufakwa ngokukhawuleza ukuba usebenza njani. Ikhethi yokuhamba kwindlela yokuhamba ayigqibekanga ngaphandle komnye.
Ubhontshisi obuninzi buza kuthengiswa nge-plastiki yomkhuseli ngeenxa zonke. Musa ukulahla; bayayiluncedo ekukhuseleni iibhuthi zakho xa uhamba, nokuba upende kwiindawo, ukuya kwindibano, okanye kwiholide.
I-Shapers yoMbala iphelele kwi- impasto ne- sgraffito . Zineenkomfa eqinile kodwa eziguquguqukayo ezenziwe kwi-silicone, oyisebenzisayo ukutshiza ipeyinzi (ngokucacileyo ayifaki ipeyinti njengobhontshisi). I-Shapers yombala nayo iyanceda ukudibanisa i-pastels. Zifumaneka iintlobo ezahlukeneyo kunye nobukhulu, kunye namazinga ahlukeneyo okuqina.
Ukufumana ulwazi oluthe vetshe, khangela iWebhsayithi yoMenzi weMbala yoMbala.
Ukuphendula kwakho kokuqala ekubeni ne-brush ezinikezelekileyo oyisebenzisayo kuphela ekugubungeni umzobo unokuba yinto engeyomfuneko. Kutheni ungasebenzisi nje enye yeebrashi zakho ezinkulu? Ewe, ucinga ukuba ukugcoba ngenye yezinto zokugqibela ozenzayo kumzobo, kwaye mhlawumbi kuphela kulezo zemizobo ocinga ukuba zifanelekile, akufanelekile ukuba utshintshwe imali encinci ukuqinisekisa ukuba yenziwe ngokufanelekileyo? Ibrashi yokuqhawulayo ayiyi kuphelisa ngokukhawuleza, ngoko akuyi kuba neyayifake indawo yokuyithatha indawo. Ubhontshisi obulungiselelayo obunceda uqinisekise ukuba ufumene ingubo epholileyo. Yaye ngokuyisebenzisa kuphela nge-varnish, ayiyi kuhlambuluka ngopende.
Ukhangele i-brush flat, ubuncinane ubuncinane beetentimitha (ububanzi bentimitha) ububanzi, malunga neyesithathu ye-intshi (1cm) obukhulu kwaye uneenwele ezinde. Ezi zi nokuba zizinwele okanye zendalo, kodwa indlela kufuneka ithambile kunye nentwasahlobo.
Awufuni i-brratchy 'shashi eyoshiya amanqaku ebrashi kwi-varnish. Khangela ukuba iinwele ziboshwe kakuhle, ukuba aziyi kuqhubeka nokuwa phantsi njengoko usebenzisa i-varnish.
Izitolo ezinkulu zezinto zobugcisa kunye neevenkile zobugcisa kwi-intanethi kufuneka zifake uluhlu lwemibhobho yokugcoba. Zikhethile uze ubone indlela abaziva bekhululekile ngayo esandleni sakho. Ngaphandle koko, jonga kwisitoreji sakho se-hardware sendawo - nangona unokuba ufuna ukunqumla ezinye iinwele zokunciphisa ubukhulu bebhoshi, kwaye qi
Hayi, awuboni izinto, oku kuluhlu lwamazinyo kwaye lukwimeko yembonakaliso yeebrashi zobugcisa. Ibhuloho yamazinyo libhayisiki epheleleyo yokupenda ipeyinti ukudala amaconsi amancinci, afana nokutshiza kwintshukumo okanye kwimpompo yamanzi, okanye ukukhwela kwidwala. Kananjalo linakho ukudala iileyile okanye ukubetha.
Ixabiso elincinci leBrash
I-brush yokunciphisa i-brush iyasiza ekusebenziseni i- gesso okanye i-primer kwisiqhekeza ngoba akudingeki ukhathazeke ngokuyifumana ngokucacileyo ngokucocekileyo emva koko, into enokuchitha ixesha. (Naliphi na i-primer eshiywe kwi-brush iya kumisa i-crystals ndawonye ngokufanelekileyo xa idla.) Ukungonakali kukuba iwele zivame ukuwa phantsi kwebhayisiki esincinci; mhlawumbi ukhethe oku kunye neminwe yakho okanye i-pair of tweezers.
I-stencil shayela ijikeleze ngeenyawo ezincinci, ezinwele ezinqamlekileyo zincinci (kunokuba zibonise). Oku kwenza kube lula ukupenda i- stencil ngaphandle kokupenda ngaphantsi kwemida.
Musa ukuwugxotha nje ngokuba ibhulashi engafanelekanga kwimifanekiso yokudweba; kunakho ukudala ukulotywa. Ngokomzekelo, amaqabunga emthini okanye uhlutha okanye utshani, intshebe ebusweni ebusweni, okanye intambo kwizinto zetsimbi.
Uhluko phakathi kweGesso kunye neMolding Paste
Ukuphepha iLizwi eliMnyama
Isikhokelo esiKhuselekileyo kwiNkcazo zeJamani ezichazayo
I-LDS Umsebenzi kunye neengcinga zeNkonzo
I-Skate 3 Iichiza, iikhowudi kunye neempumelelo
INtaba iWhitney: Intaba ephezulu kunazo zonke eCalifornia
Ukuzonwabisa kunye neendlela zokuCwangcisa ukuBhiyoza iSuku lokuzalwa sikaShakespeare